Xog aruurinta Shaqsiyaadka Isticmaala Gaadiidka Survey
Xog aruurinta Shaqsiyaadka Isticmaala Gaadiidka
Qorshaha Dhaqdhaqaaqa Gaadiidka Gobalka
Xog aruurintaa waxaa loogu talagalay in qiimeyn lagu sameeyo baahiyaha gaadiidka, hawlaha, iyo dareenada macaamiisha hadda iyo kuwa mustaqbalka labadaba. Ujeedada waa in Mid-Ohio Regional Planning Commission (MORPC, Guddiga Qorsheynta Gobalka Mid-Ohio)
laga caawiyo siday u aqoonsan lahaayeen adeegyada gaadiidka ee u baahan in la buuxiyo iyo in si wanaagsan la iskugu duwo adeegyada gaadiidka ee MORPC gaarka ahaan meelaha la xiiseenaayo ayadoo la adeegsanaayo Qorshaha Dhaqdhaqaaqa Gaadiidka Gobalka. Natiijooyinka xog aruurinta waxay sidoo kale go'aamin doonaan sidii maalgelinta federaalka sida ugu wanaagsan loogu qoondeyn lahaa adeegyada gaadiidka. Ku qor meelaha lagaala soo xariiraayo qaybta dambe ee xog aruurinta haddii aad jeceshahay inaad hesho kaarka $25 ee hadiyada ah si aad u dhiibato jawaabtaada.
Xog aruurintu waa ikhtiyaari, jawaabahaaguna waxay sii ahaanayaan kuwo qarsoodi ah. Haddii aad wax su'aal ah ka qabto xog aruurinta, aadna dooneyso inaad hesho macluumaadkii ugu danbeeyay, ama aad dooneyso inaad hesho nuqulka turjuman ee xog aruurintaan kamid ah, fadlan la xariir Lexi Petrella oo aad kala xariirayso apetrella@morpc.org ama (380) 235-1275. Sabab kastaba hakeentee haddii aadan awoodin inaad dhameystirto xog aruurinta ama caadiyanba aad dooneyso inaad cod kusoo gudbiso faaladaada ku aadan baahiyaha gaadiidka halkii aad raaci lahayd qaabka xog aruurinta, fadlan faaladaada ku dhaaf (380) 235-1275.
Khariiradda waxaa loogu talagalay tixraac ahaan: Meelaha xiisaha ah ee Gaadiidka MORPC waxaa kamid ah gobalada loo arko inay dhameystireen Qorshaha Dhaqdhaqaaqa Gaadiidka Gobalka.
* 1. Meeqa jir ayaad tahay?
* 2. Waa maxay jinsiyadaada ama qowmiyadaada?
Madoow ama Afrikaan Ameerikaan
Hispanic ama Latinx
Native American ama Hindida Maraykanka
Labo ama ka badan
* 3. Waa maxay jinsiyadaada ama qowmiyadaada?
* 4. Sanadii lasoo dhaafay muxuu ahaa dakhliga qoyskaaga?
Wax ka yar $15,000
Inta u dhaxeysa $15,000 iyo $29,999
Inta u dhaxeysa $30,000 iyo $49,999
Inta u dhaxeysa $50,000 iyo $74,999
Inta u dhaxeysa $75,000 iyo $99,999
Inta u dhaxeysa $100,000 iyo $150,000
Wax ka badan $150,000
* 5. Yaa kale oo ka tirsan qoyskaaga? (Calaamadeey dhammaan kuwa khuseeya)
Lamaanahayga ama xaaskayga
Carruurta aan awoowaha/ayeeyada u ahay
Dad aanan qaraabo ahayn
Kaligay ayaan noolahay
* 6. Ma qabtaa naafo kugu qasbaysa inaad isticmaasho bakoorad, qalabka lagu lugeeyo, gaariga curyaanka, iyo/ama qalab kale oo kaa caawinaaya inaad meelaha marmarto?
* 7. Waa maxay koodhka boostada meeshaad ku nooshahay?